गायक राईलाई अमेरिकामा अहिलेसम्म कै ठूलो सम्मान
मंगलवार, कार्तिक २१, २०७४
चर्चित गायक राजेपायल राईलाई अमेरिकामा अहिलेसम्म कै ठूलो सम्मान दिइएको छ । रोचेस्टर सिटीले राईको नाममा प्रत्येक वर्ष ‘राई इज किङ डे’ फेस्टिभल मनाईने भएको छ । त्यसैगरी, रोचेस्टर सिटीले ‘इन्टरनेशनल पप स्टार’ को उपाधि समेत प्रदान गरेको छ ।
राई ईज किङ अर्थात राजेशपायल राईलाई अमेरिकामा अहिलेसम्म कै ठूलो सम्मान दिइएको छ । गायक राईलाई अमेरिकाको रोचेस्टर सिटीका मेयर लभ्ली वारेन र डाइरेक्टर डेपुटी मेयर डा. केर्डिक एल. अलेक्जन्डरले संयुक्त रुपमा सम्मानित गरेका हुन् । रोचेस्टर सिटी हलमा गायक राईलाई प्रमाणपत्र सहित सम्मानित गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी मेयर डा. अलेक्जन्डरले अब रोचेस्टर सिटीमा प्रत्येक वर्ष ‘राई इज किङ डे’ फेस्टिभलको रुपमा मनाउंने घोषणा गरे । सोही कार्यक्रममा राईलाई ‘इन्टरनेशनल पप स्टार’ उपाधि प्रदान गरिएको छ । नेपाली कलाकारलाई अमेरिकामा अहिलेसम्म कै ठूलो सम्मान प्रदान गरेको भन्दै राईले रोचेस्टर सिटीप्रति आभार व्यक्त गरे ।
कार्यक्रम अहिलेसम्म कै भव्य, सभ्य र यति ठूलो पदाधिकारीबाट नेपाली कलाकार सम्मानित भएको जानकारी आयोजक विजय खड्काले बताए । नेपाली कलाकारलाई विमानस्थलबाट अमेरिकी प्रहरीले कार्यक्रम स्थलसम्म सुरक्षा प्रबन्ध दिएको यो पहिलो पटक भएको खड्काले बताए । राईले थाहा पाए दोबाटोमा, नमाग मसँग सहारा नमाग, तिमीले बाटो फे¥यौ अरे, दर्शन नमस्ते–३, दर्पण छायाँ–२ र झिमझिम गर्ने परेली लगायत गीत गाएर भरपूर मनोरञ्जन दिएका थिए ।